Holmes Sportklubb | Holmbygden.se
Youtube ကိုတဆင့်ပြန်ကန်ထဲမှာမီးခြစ်နှင့်ရည်မှန်းချက်များကစားခြင်းသို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်သည့်အခါ Holmes SK ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုပါ. Då och då sänder Holmbygden.se’s sportredaktion HSK’s matcher live här på hemsidan och via Youtube. ထိုပြည်၌သင်တို့သည်တတ်နိုင်သမျှလည်းဒီဂိမ်းပြန်ကန်အပြီး. “- အဘယ်မှာရှိအတွင်းမှဘောလုံးကို? တကယ့်လူကျွံဘောဖမ်းမိခဲ့သည်?”
Holmes SK ကိုရဲ့ Youtube ကို-kanalen: holmssk.se/youtube
channel ကိုအတွင်းအပြင် subscribe ဖို့ရွေးချယ်မထားပါနဲ့!
အဆိုပါဒြပ်ပေါင်း Holmes Sportklubb စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး 1927 နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာထိုကဲ့သို့သောနှင်းလျှောစီးအဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ကျေးလက်ဒေသများတွင်လူငယ်များ "တိုးပွားလာကြ" ဖြစ်ပါတယ်, နပန်း, ဟော်ကီနှင့်ဘောလုံး. ယနေ့တွင်ကလေးများကောက်ယူ- နှင့်သားသမီးတို့အဘို့လူငယ်5နှင့် 12 တနှစ်နှင့်အမျိုးသားအသင်းနှင့်အတူအကြီးတန်းဘောလုံး. Holmes ရဲ့အားကစားကလပ်ရေစာဘားနှင့်ကျွန်းသစ်avbytarbänkarအတူဒဏ်ငွေအားကစားစင်တာကမ်းလှမ်း, နှစ်ခုကွင်းနှင့် elljusspår, နှင့်ကြပါပြီ 200 အဖွဲ့ဝင်. အဆိုပါကလပ်ကိုလည်းငှားရမ်း ကနူးနှင့်ကနူးနောက်တွဲယာဉ် ဘောလ်တစ်ပါဝါညီလာခံနှင့် ပူးပေါင်း..
Holmes SK ကိုအကြောင်းကိုသတင်းစာဆောင်းပါးများ
နေ့စဉ် 10/5 2013:
“Holmes SK ကို – တစ်ခုလုံးကိုခရိုင်ဘောလုံးအသင်း“.
နေ့စဉ် 13/6 2013:
Holmes Vallen မှာကလပ်အိမ် 0692-30189.
Ulla Grelson ဥက္ကဋ္ဌ, 070-376 51 69.
တိုက်ရိုက် Links များ; တစ်ဦးကအလွှာ, Little ကလိဂ်, ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့, illuminated လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်.
Holmes SK ကိုရဲ့ facebook စာမျက်နှာ:
Holmes SK ကို
+ Holmbygden.se/စားပှဲ – စားပှဲ, ပွဲ, ဂိုးသွင်း, spelarstatististik စသည်တို့ကို.
+ Holmbygden.se/hskkalender – Sync ကို / သင့်မိုဘိုင်းနှင့်အတူလေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများကိုက်ညီ!
+ Holmbygden.se/ပြပွဲ – အားလုံး Medelpads စီးရီးများအတွက်ရလဒ်များနှင့်စားပွဲ.
+ SMS ကိုမှတဆင့် gratis HSK-resultat.
Holmes SK ကိုထံမှနောက်ဆုံးရသတင်းများ, သင်အမြဲညာဘက်ကိုကြည့်ပါ, လာမယ့်ရာသီဥတု. →
+ HolmsSK.se/g5 ယှဉ်ပြိုင်ထဲမှာ HSK ရဲ့ဘေးထွက် “Guldfemman” 2013 နှင့် 2014.
ဒီမှာပြိုင်ပွဲအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ, ကိုလညျးရှု HSK ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရွှေပဉ္စမစာမျက်နှာ.
+ OBS! ထီလက်မှတ်တွေ Tipping သို့မဟုတ်ဝယ်ယူသည့်အခါ Holmes Sportklubb ကိုထောကျပံ့ – holmssk.se/spela
+ Holmes SK ကိုရဲ့စာမျက်နှာ Facebook က.
+ Facebook ကအုပျစုမြား အားလုံး HSK ပရိတ်သတ်များအတွက်.
+ Holmes SK ကိုရဲ့ Youtube ကို-kanal: holmssk.se/youtube
+ Medelpad / div အတွက်ဒေသခံဘောလုံး. 5-သတင်း –
Holmes SK ကိုရဲ့ A-Team အနီးဆုံးဖြစ်ရပ်များ.
ဒီနေရာမှာအပြည့်အဝယှဉ်ပြိုင်ကစားပြက္ခဒိန်. Prenumerera på SMS-resultat/info från Holms SK via Holmbygden.se, အခမဲ့!:
ဆဲလ်ဖုန်းကစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့. အလိုအလျောက်အသံဖြင့် tag ကိုအားဖြင့်ခေါ်ဆိုမူလစာမျက်နှာဖုန်းများ.
စလှေတျတျောကို SMS မက်ဆေ့ခ်ျ၏ဥပမာပွဲစဉ်ရှေ့တော်၌ထို pair နဲ့ဒေသခံရာသီဥတုအစီရင်ခံစာများမှာ, နေ့ကိုများနှင့်ဂိုးသွင်းကူညီပေးနေ M.M. နှင့်အတူရလဒ်အတွက်ဖွဲ့စည်းရေး.
OBS! သငျသညျ MMS ကိုရရှိနိုငျသေချာအောင်လုပ်ပါ
(“စာတို” ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူ, သေးငယ်တဲ့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုစသည်တို့ကို).
တချို့က HSK-mail MMS အဖြစ်ပေးပို့အကြောင်းကြားနိုင်ပါကြောင်း.
MMS ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေများအတွက်, သင့်ရဲ့ပံ့ပိုးပေး Call :
Telia 90200, comviq 077-221 21 21, တယ်လီနော 020-22 22 22, သုံး 0771- 735 300.
Holmes Sportklubb ထံမှနောက်ဆုံးရသတင်း
15/5: Tennissiffror i premiären släkten är ... 0-6 blev slutresultatet i den på förhand svåra hemmapremiären mot stjärngänget från Balders IFK S-vall! Match var jämn i dom första 12-15 minuterna d&ar... ဆက်ဖတ်ရန်
15/5: Holmes Vallen မှာနေအိမ် Premiere ယနေ့ည Då var det dax för hemmapremiär ikväll på natursköna Holmvallen och det är inte vilken match som helst!!! Ikväll kommer nämligen storfavoriten till serie... ဆက်ဖတ်ရန်
8/5: စီးရီး Premiere အတွက်အရှုံး På en svårspelad gräsplan så utspejades VM i långbollar. hemmalaget Wiskan var väl det lag som tjongade och bäst men Holm grabbarna ledde med 2-0 i halvtid efter... ဆက်ဖတ်ရန်
8/5: Seriepremiär Wiskan Gone Idag möter Holm grabbarna Wiskan borta kl 19:00 i Wiskan säsongens första laguppställning lyder 1.Andreas Larsson 2.Kristian Karlsson 5.Tobias Bergqvist 7.Kristoffer Sahle’n ... ဆက်ဖတ်ရန်
စိန့်ကြားက ... ဆက်ဖတ်ရန်